Fanadihadiana: Iza ireo olona 'tena tsy tia' indrindra any UK?
Janoary 24, 2022 1 Namaky 1 aho
Niara-niasa tamin'ny YouGov ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Birmingham mba hanao fitsapan-kevitra mba hamaritana “izay heverin'ny Britanika momba ny Silamo, ny Silamo ary ireo foko sy fivavahana vitsy an'isa.”
Ny tanjona voalohany amin'ny fikarohana dia ny "hanampy amin'ny fanazavana ny halehiben'ny Islamophobia any UK."
Araka ny valin'ny fanadihadiana farany, ny Gypsies sy Irish Travelers dia nomena anarana hoe "olona faran'izay tiana indrindra" ao amin'ny firenena. UK, miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Silamo mitana ny toerana faharoa amin'ny lisitry ny vondrom-piarahamonina tsy malaza indrindra.
Ny fitsapan-kevitra dia nanambara fa ny 25.9% amin'ireo 1,667 namaly dia “mahatsiaro ho ratsy” manoloana ny Silamo, ary 9.9% no mahatsapa “tena ratsy”.
Ny Gypsies sy Irish Travelers ihany no heverin'ny besinimaro ho ratsy kokoa, ka ny 44.6% amin'ny olona dia mijery azy ireo amin'ny lafiny ratsy, hoy ny tatitra.
Nandritra izany fotoana izany, 8.5% no nihevitra ny Jiosy ho ratsy, raha 6.4% kosa no nilaza toy izany koa momba ny mainty hoditra – ary 8.4% no nilaza fa ratsy ny fijery ny fotsy hoditra.
Ny mpikaroka dia nanatsoaka hevitra fa ny fihetsika ratsy avy amin'ny vahoaka britanika manoloana ny Gypsies sy Irish Travelers dia azo hazavaina tsy amin'ny alalan'ny fanavakavahana ihany, fa koa noho ny "tsy dia misy sazy ampahibemaso amin'ny fanekena ampahibemaso ny tsy fitiavany".
Ny Islamophobia dia hita fa tonga amin'ny "karazany roa samy hafa, ara-pirazanana sy ara-pivavahana".
“Na dia miombon-kevitra amin'ny famaritana vao haingana momba ny teny hoe Islamophobia dia endrika fanavakavaham-bolon-koditra mikendry ny Miozolomana izahay, dia asehonay ihany koa fa miseho ho fanavakavahana miavaka manohitra ny fivavahana izany,” hoy ny tatitra.
Araka ny voalazan'ny mpanoratra ny tatitra, Dr. Stephen Jones, ny fady ara-tsosialy dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny valiny.
“Ny mahaliana dia hitanao fa misy, ohatra, ny fanavakavahana ny mainty hoditra Afrikana Karaiba ao amin'ny firenena UK, fa amin'ny fanadihadiana ny olona dia tsy maneho izany fankahalana izany amin'ny fomba ataony amin'ny Miozolomana, amin'ny fomba ataony amin'ny Gypsies sy Irlandey mpandehandeha," hoy izy.
Nilaza ny Dr. Jones fa misy ny fahatsapana fa ny karazana fankahalana sasany dia "eken'ny besinimaro" kokoa, ary miaiky fa sarotra ny anton'izany: “Miankina amin'ny solontenantsika amin'ny haino aman-jery izany, amin'ny politikantsika mpitarika, amin’ireo anton-javatra ara-tantara sy ara-kolontsaina samihafa.”
More on: Birmingham | silamo | Karaiba
Manatevin-daharana ny fanentanana Airbnb Live and Work Anywhere i Karaiba Karaiba|
Turks sy Caicos: Filoha vaovao ao amin'ny Birao mpizahatany Karaiba|
Previous Mikasa fiaramanidina jiosy goavana avy any Okraina i Israely raha manafika i Rosia
Manaraka Niakatra be ny vidin'ny tapakila manintona any Etazonia tao anatin'ny 5 taona farany
Febroary 5, 2022 ao amin'ny 21: 47